Ny andian-dahatsoratra Huawei P50 dia ho tonga amin'ny herinandro faran'ny volana martsa: Hiditra finday telo | Androidsis
Ho tonga amin'ny herinandro farany amin'ny volana martsa ny andiany Huawei P50: Hiditra finday telo izy io
Ny orinasan-telefaona an'i Huawei dia miala voly Na eo aza ny fivarotana Honor ho an'ny vondrona mpamatsy vola Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.Niasa nandritra ny fotoana ela ny orinasa amin'ny rafitra fiasa antsoina hoe HarmonyOS izay miorina amin'ny Android ary nambara tao amin'ny Huawei Developer Conference (2019 ).
Ny mpanamboatra dia efa manomana ny fifandimbiasan'ny tsipika Huawei P40, fitaovana izay miavaka ny fahombiazany raha ampitahaina amin'ny fifaninanana akaiky indrindra. Ny andiany Huawei P50 dia efa nanana daty fampisehoana manokana, ny 26 ka hatramin'ny 28 martsa, izany no manome toky ny mpivarotra fanta-daza.
1 Hisy telefaona telo hambara
2 Huawei dia hitombo tsy misy GMS
Hisy telefaona telo hambara
Ny loharanom-baovao marim-pototra dia miresaka momba ny maodely telo ao anatin'ny tsipika misy ny marika ho avy fivarotana ny fitaovan'ny orinasa any Azia sy ivelan'ny tsenan-tranony. Izy io koa dia manonona antsipiriany vitsivitsy momba ny famaritana, iray volana mahery taorian'ny nanambarana ilay tsipika voalaza etsy ambony.
El Huawei P50 dia hanana ny processeur Kirin 9000E, raha ny modely Huawei P50 Pro sy Huawei P50 Pro + kosa dia hampandeha puce Kirin 9000, fa tsy mamaritra ny maodely manokana. @ RODENT950 dia efa nilaza fa nahavita ny famolavolana izy ireo ary efa saika vonona hamokarana betsaka, hitondra «endrika vaovao» ny andiany vaovao.
Huawei P50, P50 Pro ary P50 Pro + dia hanohy hiloka amin'ny takelaka OLED ny fahombiazana tsara nomen'izy ireo tamin'ny fitaovana teo aloha, amin'ny maha orinasa BOE azy ireo. LG sy Samsung dia misongadina ankehitriny hanome ny takelaka amin'ity karazana ity izay hitan'izy ireo ho mpifaninana lehibe.
Huawei dia hitombo tsy misy GMS
Taorian'ny vokatra tsara azo avy amin'ny Huawei Mobile Services (HMS), ny orinasa dia mikasa ny hitombo hatrany amin'ny firenena rehetra amidy ny finday finday avo lenta, manome sakafo ny fivarotana AppGalog sy ny serivisy ao aminy. Mampanantena ny hanao hetsika avo lenta ny fampisehoana ny singa telo farafaharatsiny ny tsipika iray izay hanohy hiloka amin'ny serivisiny manokana fa tsy hiankina amin'ny an'ny Google.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ho tonga amin'ny herinandro farany amin'ny volana martsa ny andiany Huawei P50: Hiditra finday telo izy io
Mahafinaritra ve ianao? Avy aiza ity mpanoratra ity?
DaniPlay dia hoy izy:
Salama Juan, ny varotra ny tsipika P40 eo amin'ny tsena espaniola dia fahombiazana, na dia tsy nahatratra ny varotra andrasana any amin'ny firenen-kafa aza, marika mitovy amin'ny fahombiazana. Mirary ny soa indrindra!.
Valio amin'i DaniPlay
Azonao esorina izao ny app SHAREit, tsy azo antoka izany
Ahoana ny fomba fanovana ny fitendry keyboard amin'ny WhatsApp